Case နှင့် Tube API ကို SPECIFICATION 5CT နဝမဆောငျးပါးမြား-2012 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းများအတွက်တရုတ် Specification | ရွှေ Sanon
API ကို spec 5CT-2018 Case နှင့် Tube
စံ: API ကို 5CT
grade Group မှ: J55, K55, N80, L80, P110, etc
အရှည်: R1, R2, R3
လျှောက်လွှာ: တော၌ထားသော & Case ပိုက်
အပူကုသမှု: ပြေ & Normal
အထူးပိုက်: က Short ပူးတွဲ
Api5ct အတွက်ပိုက်အဓိကအားဖြင့်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရေတွင်းများနှင့်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏တူးဖော်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ရေနံထည်အဓိကအားဖြင့်ရေတွင်းနှင့်ကောင်းစွာ၏ပြီးစီး၏ပုံမှန်လည်ပတ်စေရန်ရေတွင်း၏ပြီးစီးစဉ်နှင့်ပြီးနောက်ကျင်းပေါက်မြို့ရိုးကိုကူညီပံ့ပိုးရန်အသုံးပြုသည်။
grade: J55, K55, N80, L80, P110, etc
grade ပုံစံ ကို C MN mo CR ni Cu : P s ကို si
မိ max ကို မိ max ကို မိ max ကို မိ max ကို max ကို max ကို max ကို max ကို max ကို
N80 မေး - - - - - - - - - - 0,030 0,030 -
R95 - - 0.45 က c - 1,90 - - - - - - 0,030 0,030 ၀.၄၅
L80 1 - 0,43 တစ်ဦး - 1,90 - - - - 0.25 ၀.၃၅ 0,030 0,030 ၀.၄၅
L80 9Cr - 0,15 ၀.၃ 0,600င် 90 1,10 8.00 10,0 ၀.၅၀ 0.25 0,020 0,030 ၁.၀၀
L80 13Cr 0,15 0,22 0.25 ၁.၀၀ - - 12,0 14,0 ၀.၅၀ 0.25 0,020 0,030 ၁.၀၀
C90 1 - ၀.၃၅ - 1,20 0.25 ခ 0,85 - ၁.၅ ၀.၉၉ - 0,020 0,030 -
T95 1 - ၀.၃၅ - 1,20 0.25 ခ 0,850င် 40 ၁.၅ ၀.၉၉ -0င် 020 0,010 -
C110 - - ၀.၃၅ - 1,20 0.25 ၁.၀၀ 0,40 ၁.၅ ၀.၉၉ - 0,020 0,005 -
P1I0 အီး - 一 - - - - - - - - 0,030 င 0,030 င -
QI25 1 - ၀.၃၅ ၁.၃၅ - 0,85 - ၁.၅ ၀.၉၉ - 0,020 0,010 -
ပြမှတ်ချက် Element တွေကိုကုန်ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီရင်ခံရကြလိမ့်မည်
ထုတ်ကုန်ရေနံမီးမငြိမ်းသို့မဟုတ်ပေါ်လီမာ-မီးမငြိမ်းလျှင် L80 များအတွက်အဆိုပါကာဗွန်အကြောင်းအရာ 0.50% အများဆုံးအထိတိုးလာနိုင်ပါသည်။
မြို့ရိုးအထူလျော့နည်း 17,78 မီလီမီတာထက်လျှင်ခအဆင့် C90 အမျိုးအစား 1 သည် molybdenum အကြောင်းအရာမျှမနိမ့်ဆုံးသည်းခံစိတ်ရှိပါတယ်။
ထုတ်ကုန်ရေနံမီးမငြိမ်းလျှင် c ကို R95 များအတွက်ကာဗွန် contect 0,55% အများဆုံးအထိတိုးလာနိုင်ပါသည်။
မြို့ရိုးအထူထက်နည်း 17,78 မီလီမီတာလျှင်ဃ T95 အမျိုးအစား 1 သည် molybdenum အကြောင်းအရာ 0,15% နိမ့်ဆုံးမှလျော့နည်းသွားနိုင်ပါသည်။
EW အဆင့် P110 သည်ဖော့စဖောရက်အကြောင်းအရာသည်အီး 0,020% အများဆုံးနှင့်ဆာလ်ဖာအကြောင်းအရာ 0,010% အများဆုံးရကြလိမ့်မည်။
စုစုပေါင်း elongated လက်အောက်တွင် Load
ခိုင်မာသော က c တစ်ဦး,
Allow ခွန်အားဖြစ်မူကွဲ ခ
19,04 မှ 12,71
25,39 မှ 19,05
တစ် အငြင်းပွားမှု၏အမှု၌, ဓာတ်ခွဲခန်း Rockwell ကို C ခိုင်မာသောစမ်းသပ်ခြင်းဒိုင်လူကြီးနည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုရလိမ့်မည်။
ခ အဘယ်သူမျှမခိုင်မာသောကန့်သတ်သတ်မှတ်ထားသောနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအပြောင်းအလဲ 7.8 နှင့် 7.9 နှင့်အညီတစ်ဦးကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ကန့်သတ်ထားပါသည်။
က c အတန်း L80 (အားလုံးအမျိုးအစားများ), C90, T95 နှင့် C110 ၏မှတဆင့်-မြို့ရိုးကိုခိုင်မာသောစမ်းသပ်မှုများအတွက် HRC စကေးတွင်ဖော်ပြထားလိုအပ်ချက်များအများဆုံးယုတ်ခိုင်မာသောအရေအတွက်ဖြစ်ကြသည်။
ထုတ်ကုန်၏သံမဏိပစ္စည်းများအတွက် 1. ထုတ်လုပ်သူဆန့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ elecrtrice များအတွက်ဆန့စမ်းသပ်ရာတွင်အသုံးပြုပိုက်လုပ်သို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်သံမဏိပိုက်အပေါ် perfomred မှသောသံမဏိပြားပေါ်မှာဖျော်ဖြေနိုင်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်သူရဲ့ရွေးချယ်မှုအပေါ် depondeds ပိုက် welded ။ ထုတ်ကုန်အပေါ်ဖျော်ဖြေတစ်ခုစမ်းသပ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအဖြစ်ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
2. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုပြွန်ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်ရလိမ့်မည်။ မျိုးစုံစမ်းသပ်မှုလိုအပ်သည်သောအခါ, နမူနာနည်းလမ်းကိုယူနမူနာအစအဦးများနှင့်အပူကုသမှုသံသရာ (ရှိလျှင်) ၏အဆုံးနှင့်ပြွန်နှစ်ခုလုံးကြီးစွန်းကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်သေချာစေရမည်။ မျိုးစုံစမ်းသပ်မှုလိုအပ်သည်သောအခါ, ပုံစံကတော့ thickened ပြွန်နမူနာတစ်ခုပြွန်နှစ်ခုလုံးစွန်းမှယူစေခြင်းငှါ မှလွဲ. ကွဲပြားခြားနားသောပြွန်ကနေယူရမည်။
3. အဆိုပါချောမွေ့စွာပိုက်နမူနာပိုက်၏လုံးပတ်အပေါ်မည်သည့်အနေအထားမှာယူနိုင်ပါတယ်; ဂဟေပိုက်နမူနာအကြောင်းကို 90 မှာယူရပါမည်°ဂဟေချုပ်ရိုးမှ, ဒါမှမဟုတ်ထုတ်လုပ်သူ၏ထို option မှာ။ နမူနာကတော့ချွတ်အကျယ်၏လေးပုံတပုံအကြောင်းကိုမှာယူနေကြပါတယ်။
နမူနာပြင်ဆင်မှုချွတ်ယွင်းဖြစ်တွေ့ရှိဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှဆီလျှော်ပစ္စည်းများတစ်ခုမရှိခြင်းလည်းမရှိလျှင် 4. အဘယ်သူမျှမကိစ္စစမ်းသပ်မှုမီနှင့်အပြီး, နမူနာအတူတူပြွန်ကနေဖန်ဆင်းတော်အခြားနမူနာနှင့်အတူဖျက်သိမ်းအစားထိုးနိုင်ပါသည်။
5. ထုတ်ကုန်များ၏တစ်သုတ်ကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ဆန့စမ်းသပ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်, ထုတ်လုပ်သူ Re-စစ်ဆေးခြင်းများအတွက်ပြွန်၏တူညီသောအသုတ်အနေဖြင့်အခြား3ပြွန်ယူနိုငျသညျ။
ယင်းနမူနာ၏အပေါငျးတို့သ retests လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့လျှင်, ပြွန်များ၏အသုတ်မူလကနမူနာသောအရည်အချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးပြွန် မှလွဲ. အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးထက်ပိုနမူနာပိုင်းတွင်နမူနာသို့မဟုတ် retesting ဘို့တသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနမူနာသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းမထားဘူးဆိုရင်, ထုတ်လုပ်သူပြွန်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း၏အသုတ်စစ်ဆေးခြင်းလိမ့်မည်။
ထုတ်ကုန်များကိုပယ်ချအသုတ်သစ်တစ်ခုအသုတ်အဖြစ် reheated နှင့် reprocessed နိုင်ပါသည်။
1. အဆိုပါစမ်းသပ်မှုနမူနာ (2-1 / 2in) လျော့နည်း 63.5mm ထက်မစမ်းသပ်လက်စွပ်ဒါမှမဟုတ်အဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မည်။
ပိုက်ကိုယ်စားပြုအဖြစ် 2. နမူနာအပူကုသမှုမပြုမီဖြတ်ပေမယ့်တူညီတဲ့အပူကုသမှုဘာသာရပ်နိုင်ပါသည်။ တစ်သုတ်စမ်းသပ်အသုံးပြုသည်ဆိုပါက, အစီအမံနမူနာနှင့်နမူနာပြွန်အကြားဆက်ဆံရေးကိုသိရှိနိုင်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရကြလိမ့်မည်။ တစ်ဦးချင်းစီအသုတ်ထဲမှာတစ်ခုချင်းစီကိုမီးဖိုခံရသင့်ပါတယ်။
3. အဆိုပါနမူနာနှစ်ခုကိုအပြိုင်ပြားအကြားပြားတွင်စေရမည်။ စမ်းသပ်မှုနမူနာ flattening ၏အသီးအသီးအစုံမှာတော့တဦးတည်းဂဟေ 90 ရက်ပြားခဲ့သည်°နှင့်အခြား0°မှာပြား။ ပြွန်နံရံများကိုအဆက်အသွယ်၌ရှိကြ၏သည်အထိနမူနာပြားတွင်စေရမည်။ အဆိုပါအပြိုင်ပြားအကြားအကွာအဝေးလျော့နည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုထက်မပြုမီ, အဘယ်သူမျှမအက်ကြောင်းသို့မဟုတ်လပ်ချိန်ပုံစံမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာပေါ်လာသငျ့သညျ။ တစ်ခုလုံးကို flattening လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမရှိဆင်းရဲသားကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိသင့်တယ်, fused မဟုတ်, delamination, သတ္တု overburning, ဒါမှမဟုတ်သတ္တု extrusion welds ။
5. နေတဲ့ပြွန်ကိုကိုယ်စားပြုမဆိုနမူနာသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်လိုအပ်ချက်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမှီတိုင်အောင်, ထုတ်လုပ်သူဖြည့်စွက်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်ပြွန်၏တူညီသောအဆုံးကနေနမူနာယူနိုငျသညျ။ သို့သော်နမူနာကောကျပြီးနောက်ချောပိုက်၏အရှည်မူရင်းအရှည်၏ထက်နည်း 80% ဖြစ်မပြုရပါ။ ထုတ်ကုန်များ၏တစ်သုတ်ကိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ပြွန်မဆိုနမူနာသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်, ထုတ်လုပ်သူထုတ်ကုန်များအသုတ်အနေဖြင့်နှစ်ဦးကိုအပိုဆောင်းပြွန် ယူ. ပြန်လည်စမ်းသပ်များအတွက်နမူနာဖြတ်လိမ့်မည်။ ဤအ retests ၏ရလဒ်များကိုအပေါငျးတို့သလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့လျှင်, ပြွန်များ၏အသုတ်မူလကနမူနာအဖြစ်ရွေးချယ်ထားသောပြွန် မှလွဲ. အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ retest နမူနာမဆိုသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်, ထုတ်လုပ်သူတဦးတည်းအားဖြင့်အသုတ်တဦးတည်း၏ကျန်ရှိသောပြွန်ကိုအမြည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ထုတ်လုပ်သူများကထို option မှာပြွန်မဆိုသုတ် Re-အပူပြွန်၏အသစ်တစ်ခုအသုတ်အဖြစ်ကုသနှင့် retested နိုင်ပါသည်။
ပြွန်များအတွက် 1. (မှတ်တမ်းတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစည်းမျဉ်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပြသပြီမဟုတ်လျှင်), နမူနာအစုတခုချင်းစီတွေအများကြီးထဲကနေယူရမည်။ အမိန့် A10 (SR16) မှာ fixed လျှင်, စမ်းသပ်မှုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
2. ထည်သည်,3သံမဏိပိုက်စမ်းသပ်ချက်အဘို့အသီးအသီးအသုတ်အနေဖြင့်ယူရပါမည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်ပြွန်ကျပန်းမရွေးခံရကြလိမ့်မည်ကို၎င်း, နမူနာနည်းလမ်းပေးနမူနာအပူဆေးကုနေစဉ်အစအဦးများနှင့်အပူကုသမှုသံသရာနှင့်မျက်နှာစာ၏အဆုံးနှင့်လက်၏နောက်ကျောကြီးစွန်းကိုယ်စားပြုနိုင်မသေချာစေရမည်။
3. Charpy V-ထစ်သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်
နမူနာပြင်ဆင်မှုချွတ်ယွင်းဖြစ်တွေ့ရှိဒါမှမဟုတ်စမ်းသပ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှဆီလျှော်ပစ္စည်းများတစ်ခုမရှိခြင်းလည်းမရှိလျှင် 4. အဘယ်သူမျှမကိစ္စစမ်းသပ်မှုမီနှင့်အပြီး, နမူနာအတူတူပြွန်ကနေဖန်ဆင်းတော်အခြားနမူနာနှင့်အတူဖျက်သိမ်းအစားထိုးနိုင်ပါသည်။ နမူနာရိုးရှင်းစွာသူတို့ကနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်စုပ်ယူဖြည့်ဆည်းကြပါဘူးရိုးရိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချွတ်ယွင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါဘူး။
တစ်ဦးထက်ပိုနမူနာများ၏ရလဒ်နိမ့်ဆုံးစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်စုပ်ယူ, ဒါမှမဟုတ်တဦးတည်းနမူနာများ၏ရလဒ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံး၏ 2/3 စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်စုပ်ယူသည်ထက်နိမ့်ထက်နိမ့်သည်မှန်လျှင် 5. သုံးနောက်ထပ်နမူနာအတူတူအပိုင်းအစထံမှယူရမည်နှင့် retested ။ တစ်ဦးချင်းစီ retested နမူနာများ၏သက်ရောက်မှုစွမ်းအင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သို့မဟုတ်စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်စုပ်ယူသည့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးမှတူညီကြလိမ့်မည်။
6. အချို့စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမသစ်ကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်အခွအေနနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်လျှင်သုံးနောက်ထပ်နမူနာယင်းအသုတ်၏အခြားသုံးအပိုင်းပိုင်း၏အသီးအသီးကနေယူနေကြသည်။ လူအပေါင်းတို့သည်အပိုဆောင်းအခြေအနေများလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းလျှင်, အသုတ်စပိုင်းတွင်ပျက်ကွက်သောတဦးတည်းမှတပါးအဘယ်အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုထပ်ဆောင်းစစ်ဆေးခြင်းအပိုင်းအစလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမပါဘူးဆိုရင်, ထုတ်လုပ်သူတဦးတည်းအားဖြင့်အသုတ်တဦးတည်း၏ကျန်ရှိသောအပိုင်းပိုင်းစစ်ဆေးခြင်းဖို့ရှေးခယျြ, သို့မဟုတ်အသုတ် reheat အသစ်တစ်ခုအသုတ်ထဲမှာစစ်ဆေးခြင်းလိမ့်မည်။
7. ကနဦးသုံးပစ္စည်းတစ်ခုထက် ပို. အရည်အချင်းတစ်သုတ်သက်သေပြရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းပြွန်များ၏အသုတ်အရည်အချင်းပြည့်ဖြစ်ပါသည်သက်သေပြခွင့်မပေးသည်ကိုငြင်းပယ်နေကြသည်။ ထုတ်လုပ်သူအပိုင်းအစအားဖြင့်ကျန်ရှိနေသောနေသည်ဟုသူအပိုင်းအစစစ်ဆေးခြင်းဖို့ရှေးခယျြ, သို့မဟုတ်အသုတ် reheat အသစ်တစ်ခုအသုတ်ထဲမှာစစ်ဆေးခြင်းစခွေငျးငှါ .
1. တစ်ခုချင်းစီပိုက် thickened (သင့်လျော်သောပါက) နှင့်နောက်ဆုံးအပူကုသမှု (သင့်လျော်သောလျှင်) အပြီးတပြင်လုံးကိုပိုက်၏ hydrostatic ဖိအားစမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ခံရကြလိမ့်မည်နှင့်ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိဘဲသတ်မှတ်ထားသော hydrostatic ဖိအားကိုရောက်ရှိစေရမည်။ အချိန်ကိုင်ပြီးစမ်းသပ်ဖိအားလျော့နည်း 5s ထက်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂဟေဆော်ပိုက်အဘို့, ပိုက်၏ဂဟေစမ်းသပ်ဖိအားအောက်မှာပေါက်ကြားမှုအတွက် check လုပ်ထားရလိမ့်မည်။ မြေတပြင်လုံးပိုက်စမ်းသပ်နောက်ဆုံးပိုက်အဆုံးအခွအေနေအဘို့လိုအပ်သောဖိအားမှာအနည်းဆုံးကြိုတင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးမဟုတ်လျှင်, စက်ရုံ processing အတွက်ချည်တပြင်လုံးကိုပိုက်အပေါ်တစ်ဦး hydrostatic စမ်းသပ်လုပ်ဆောင် (သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုစီစဉ်) သင့်ပါတယ်။
အပူကုသခံရဖို့ 2. သွယ်တန်းထားသောပိုက်နောက်ဆုံးအပူကုသမှုပြီးနောက် hydrostatic စမ်းသပ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ Threaded ကြီးစွန်းနှင့်အတူအားလုံးပိုက်၏စမ်းသပ်မှုဖိအားဟာ Thread နှင့်သစ်သားဆက်စရာအနည်းဆုံးစမ်းသပ်မှုဖိအားဖြစ်ကြလိမ့်မည်။
3 အချော Flat-အဆုံးပိုက်၏အရွယ်အစားနှင့်မဆိုအပူ-ကုသရေတိုအဆစ်မှ processing ဖြင့်, ထို hydrostatic စမ်းသပ်ပြားအဆုံးဒါမှမဟုတ်ချည်ပြီးနောက်ဖျော်ဖြေရလိမ့်မည်။
ထက်သေးငယ်သို့မဟုတ် 5-1 /2မှတူညီနေတဲ့အရွယ်အစားနှင့်အတူ thickened ပူးတွဲပူးတွဲ Tube များအတွက်အောက်ပါသည်းခံစိတ်အဆိုပါ thickened အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဘေးမှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 127mm (5.0in) ၏အကွာအဝေးအတွင်းပိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်ဘက်အချင်းရန်လျှောက်ထား; အောက်ပါသည်းခံစိတ်အဆိုပါ thickened သောအဘို့ကိုမှချက်ချင်းကပ်လျက်ပြွန်များ၏အချင်းမှခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ညီမျှ၏အကွာအဝေးအတွင်းပြွန်၏အပြင်ဘက်အချင်းသက်ဆိုင်ပါသည်။
>5~ ≤8 5/8 + 3.18mm ~ -0,75% OD (+ 1/8 ~ -0,75% OD)
2-3 / 8 နှင့်ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားနှင့်အတူပြင်ပ thickened Tube များအတွက်အောက်ပါသည်းခံစိတ်ပိုက်၏အဆုံးကနေထူနှင့်အထူတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသောပိုက်၏အပြင်ဘက်အချင်းရန်လျှောက်ထား
အောက်ပါဇယားသည်စံအလေးချိန်သည်းခံစိတ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြစ်ပါတယ်။ နိမ့်ဆုံးမြို့ရိုးကိုအထူထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နံရံအထူ၏ 90% မှတူညီသတ်မှတ်ထားသောအခါ, တစ်ခုတည်းအမြစ်၏ဒြပ်ထုသည်းခံစိတ်၏အထက်ပိုင်းကန့်သတ် + 10% အထိတိုးမြှင့်ထားရမည်
လူပျို Piece + 6.5 ~ -3,5
ယာဉ် Load Weigh≥18144kg (40000lb) -1,75%
ယာဉ် Load <18144kg (40000lb) အလေးချိန် -3,5%
အမိန့်Quantity≥18144kg (40000lb) -1,75%
အမိန့်အရေအတွက် <18144kg (40000lb) -3,5%
ယခင်: ချောမွေ့စွာအလွိုင်းသံမဏိဘွိုင်လာသွယ်တန်းထားသောပိုက် Superheater အလွိုင်းပိုက်အပူ Exchange Tube
နောက်တစ်ခု: ချောမွေ့စွာအလတ်စားကာဗွန်သံမဏိဘွိုင်လာနဲ့ Superheat ပြွန် ASTM A210 စံ
API ကို 5CT သံမဏိပိုက်